Ukufumana Iinjongo | Isilimela 2022
Uyifumana njani inkanuko yakho kwaye uphile ubomi obanelisa ngakumbi
Ukuba ufuna ukufumana intsingiselo yobomi kwaye uzive uzalisekisiwe, funda indlela yokufumana uthando lwakho. Nazi ezinye iingcebiso eziphathekayo zokuba uqalise.
Ubeka iinjongo zakho, kodwa ngaba zilumkile? Nantsi imizekelo ecacileyo yeenjongo ze-SMART zokukukhokela ngokumisela iinjongo ezifanelekileyo zokuphucula ubomi bakho.
Iingcamango ezingama-50 zesisombululo sonyaka omtsha kunye nendlela yokufikelela nganye yazo
Ngunyaka omtsha kwaye lixesha lokwenza umahluko! Funda ezi ngcebiso ziluncedo ekuboneni isisombululo seminyaka yakho emitsha kwaye wenze inkqubela phambili yokwenyani.
Iinjongo zeNtsebenzo ezili-15 zokuKhupha iZiphumo ezingaQhelekanga eMsebenzini
Ngaba ujonge indlela onokufikelela ngayo kwiziphumo ezingaqhelekanga kwindawo yokusebenzela? Nazi iinjongo ezili-15 zokusebenza ukukhulisa ubuchule bakho kunye nemveliso.
I-7 yeeNjongo zokuKhangela iiNjongo eziNgcono zokukunceda ufezekise iinjongo zakho
Ngaba ufuna ukugcina umkhondo wenkqubela phambili yakho kwaye ufikelele kwinjongo yakho? Ngaba ujonge usetyenziso lokulandela umkhondo olusebenzela wena? Ungaphoswa lolu luhlu lweyona midlalo ilungileyo yokulandela umkhondo.
Uluhlu oluGqityiweyo lweenjongo ezingama-29 zokuPhila ubomi obanelisayo
Ukuba ujonge ekunikezeleni kwisakhono sakho, phila ubomi obanelisayo, kwaye ufumane ulonwabo ebomini, olu luhlu lweenjongo zezona zikhokelo!
Iingcamango zeBhodi ezi-8 zokujonga ngeso lengqondo iiNjongo zakho eziBalulekileyo
Yintoni ibhodi yombono? Eli nqaku likunika ukuqonda okuxabisekileyo kwiindidi ezahlukeneyo zeembono zebhodi yombono kwaye wabelana ngeendlela ezimnandi zokwenza ezakho.
Indlela yokwenza ukuba amaphupha akho azaliseke ngamanyathelo alula ali-9
Ngaba udiniwe ngamaphupha akho? Akunyanzelekanga ukuba kube njalo. Amaphupha akho anokuzaliseka. Funda ukuze ufumane indlela yokwenza amaphupha akho abe yinyani.
Iinjongo ezingama-23 zoBomi zokuSeta nokuFezekisa impumelelo yakho
Ngaphandle kweenjongo ezimangalisayo kwaye ziyilwe ngocoselelo ebomini, awusoze ufezekise impumelelo yakho. Nazi ezinye zeentandokazi zethu ukuba uhambe.
Iinjongo ezi-15 zoMsebenzi zokuNceda uphumelele kwiKhondo lakho
Ngaba unazo naziphi na iinjongo zomsebenzi? Nalu uluhlu lweenjongo zakho zomsebenzi zokukunceda ekuziqhelaniseni nokuzazi, ukubulela kunye nentsebenziswano.
Izinto ezi-7 ekufuneka uyazi ukuba ufikelela kumaphupha akho
Ngaba ufuna ukwazi ukuba ungafikelela njani kumaphupha akho? Qiniseka kwaye Unethemba. Lo ngumqolo wazo zonke ezinye iingcebiso zokufikelela kumaphupha akho.
Iindlela ezi-8 ezilula nezisebenzayo zokuQala ukufezekisa iinjongo namhlanje
Ukufikelela kwiinjongo akukho lula, ngakumbi xa ujonge phezulu, kodwa kunokwenzeka. Nazi iindlela ezi-8 ezilula zokufikelela kwiinjongo zakho zokugqibela.
Ungazibekela Njani iinjongo kwaye uzifezekise ngempumelelo
Ukucinga ukuba ungazibekela njani iinjongo kwaye uzifezekise ukuze ufezekise amaphupha akho amakhulu? Nantsi inyathelo ngenyathelo lesicwangciso sokukunceda ufezekise iinjongo zakho.
Iindlela ezili-13 zokuboniswa zokukunceda ufezekise iinjongo zakho
Iindlela ezichanekileyo zokuboniswa kunokukunceda uphumelele-nokuba unqwenela ukufikelela phi. Nazi iindlela ezili-13 zokubonisa onokuzisebenzisa.
Iindidi ezili-9 zeNjongo zokuba uBomi Bakho buHambele kwicala elifanelekileyo
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeenjongo onokuzibekela zona ukufezekisa ngakumbi kwiindawo ezahlukeneyo zobomi bakho. Fumanisa ukuba loluphi uhlobo ekufuneka ulusetile ukuze ufumane into oyifunayo.
Ululinganisa njani usukelo (Ngemizekelo yeenjongo ezingqinisisekayo)
Ukuba ufuna ukuba amaphupha akho azaliseke, uwaguqulele kwiinjongo ezinokulinganiswa. Funda apha malunga nemizekelo yeenjongo ezinokulinganiswa kwaye ufunde indlela yokubeka eyakho.
Ungazibekela Njani Iinjongo Zamakhondo Amakhondo Omsebenzi (Ngemizekelo)
Ungaze ukhethe ikhondo lomsebenzi ngaphandle kokwenza isicwangciso. Apha uya kufunda ukuba ungaziphumeza njani iinjongo zomsebenzi ze-SMART, ngemizekelo yeenjongo zomsebenzi.
Iingcaphuno ezingama-50 malunga nokubeka iinjongo ukuze ukhuthazwe kwaye uphefumlelwe
Ngaba unengxaki ekubekeni okanye ekufezekiseni iinjongo zakho? Nazi izicatshulwa ezingama-50 malunga nokubeka iinjongo eziza kukukhuthaza ukuya empumelelweni.
Iinjongo ezili-15 zemihla ngemihla zokuSeta uBomi obuQhutywa ngakumbi
Ukubeka iinjongo zemihla ngemihla kunokukhawulezisa ukukhula kwakho kwaye kukuxhobise ngamandla ukukuqhubela empumelelweni. Zama nayiphi na kwezi njongo ukukutyhalela kwicala elifanelekileyo namhlanje.
Ungazibekela Njani iinjongo zexesha elide kwaye ufezekise impumelelo
Ufuna ukuba phi kwiminyaka emi-5 okanye elishumi? Ukuze wenze amaphupha akho aphumelele, kufuneka usete iinjongo zexesha elide. Nantsi indlela yokuqalisa.